Ciidamo katirsan DF-ka oo dad safar ah ku dilay gobolka Sh/dhexe.
Monday August 05, 2019 - 21:04:50 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar hubeysan oo maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka ay ka geysteen deegaan dhaca duleedka degmada Balcad ee Sh/dhexe.
Wararka ka imaanaya degmada Balcad ayaa sheegaya in ugu yaraan sedax qof oo shacab ah ay dhinteen kadib markii maleeshiyaadka dowladda oo isbaaro utiillay wadada laamiga ah ay rasaas ku fureen gaari NOHA ah oo kusii jeeday Balcad kana yimid magaalada Muqdisho.
Dadka dhintay ayaa kala ahaa darawalkii gaariga,qof dumar ah iyo nin oday ah qaar kamid ah dadkii ka badbaaday weerarka ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka rasaasta ku furay gaariga ay darawalka weydiisteen lacago baad ah balse uu ka dhega adeygay.
Ma ahan markii ugu horraysay oo dad shacab ah ay maleeshiyaadka dowladda ku dileen deegaanno katirsan gobolka Sh/dhexe, bishii lasoo dhaafay duleedka degmada Cadale ayaa lagu rasaaseeyay gaari xamuul ah waxaana ka dhashay khasaara dhimasho iyo dhaawac ah.
Mas'uul katirsanaa maamulka Hirshabelle oo lagu dilay gobolka Hiiraan.
Askar katirsan dowladda oo lagu dilay deegaanka Weydoow.